Andrefana vs Midwest Round II | Martech Zone
Alarobia, Septambra 15, 2010 Alakamisy, Jona 18, 2015 Adam Small
Tamin'ny herinandro lasa teo dia teo amin'ny tontonana iray aho tao amin'ny The Combine - 2010 nantsoina Mandehana Andrefana: Midwesterners teo aloha izay nifindra tany amin'ny Silicon Valley mizara ny tantaran'izy ireo. Izaho dia iray tamin'ireo olona efatra nifanakalo hevitra momba ny tantarantsika manokana ary namono afo tao amin'ny Twitter izy io ary lasa ny Cat 4 rehefa nandefa ny fihetsiny i Doug Karr rehefa namerina ny Atambatra ny 2010 Eto.
Ireo fahatsapana rehetra ireo dia nohamarinina tanteraka noho ny endrika marivo amin'ny endrika, izay masaka ho an'ny manaikitra am-bava, saingy tsy ampy amin'ny famoahana fahazavana momba zavatra iray mendrika ny 10 minitra resaka tsotra fotsiny isaky ny olona. Doug Karr dia tena tsara fanahy tamin'ny fanomezana ahy fotoana hisitrahana an'ity dinika ity hanomezako ny fomba fijeriko - tsy momba izay nidina tany Combine - fa hamerina azy io amin'ny adihevitra iray eo Andrefana vs Midwest (miaraka amiko amin'ny anjara asan'ny Drago) ho an'ny iray izay manome lalindalina kokoa ny manodidina ny fandraharahana eto San Francisco sy any Midwest (raha ny amiko Bloomington, IN).
Heveriko fa misy lesona, mifototra amin'ny fitsikerana ara-dalàna, izay afaka manome fotoana amin'izany ho antsika rehetra na inona na inona lafiny misy antsika. Rehefa dinihina tokoa, tsy ity ve no iray amin'ireo andry iankinan'ny fandraharahana?
Ny traikefa zaraina dia mamolavola ny fiarahamonina sy ny kolontsainay
Ny vondrom-piarahamonina Andrefana sy ny afovoany andrefana dia samy manana ny lanjany avokoa amin'ny toerana roa, saingy misy paoma raha ampitahaina amin'ny voasary raha ny momba ny dinamika fanaovan-dry zareo. Mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny olona eto ny tantarako: ny mivoaka any Andrefana dia fanoharana mihetsika izay manana tantara manankarena sy matanjaka amin'ny fampandrosoana ny firenentsika. Tsy toa an'i Lewis sy Clark, tsy misy olona ankehitriny mivily ho any ambony, miady amin'ny bera mahafinaritra ary mifampiraharaha amin'ny ady Indiana Teratany Amerikanina, fa toa azy ireo, isika rehetra dia mizara fahatsapana fihaonana mitovy amin'izany - fihaonana amin'ny olona, ​​ny velaran-tany ary amin'ny tenantsika sy ny fetra ananantsika rehefa nanao risika izahay handao ny fampiononana an-trano ary hifindra Andrefana. Tsy maro amintsika no avy eto, fa manangana ny fiaraha-monina misy antsika amin'ireo traikefa iraisana mihoatra ny lovantsofina toy ny fiteny, kilasy sosialy-toekarena, loko ary mankahala an'i Kanye West.
Any amin'ny faritra afovoany andrefana, ny fiarahamonina dia toetra iray matanjaka indrindra sy manintona indrindra amin'ny kolotsaina rehetra manerantany. Ny olona any afovoany andrefana dia manome lanja ny fifanarahan'ny tsirairay avy, amin'ny maha-olona tia mandray vahiny (raha tsy eo amin'ny lalao baolina kitra Ohio St - Mich) ianao, ary mamita hatrany ilay asa amin'ny fanamoriana kely araka izay azo atao (Raha toa ka mametraka anarana eo an-damosina ny Indiana University. amin'ny akanjon'izy ireo, tsy ho gaga aho raha mivadika ho antontam-bato vatosokay mirehitra Bloomington). Mahery vaika ity fahatsapana ny fiarahamonina ity, mety ho fanahiana ny mamela azy ao aoriany hifindra any amin'ny toerana ahafahanao mandoa vola $ 1,700 isam-bolana hipetrahana anaty boatin-kiraro eo ambonin'ny tsipika mandaitra iray mavitrika.
Noho izany, ny vondrom-piarahamonina roa tonta dia manana fifamatorana mafy, fa ny soatoavina sy ny traikefa namorona ireo fatorana ireo dia miteraka tombony sy fatiantoka amin'ny fandraharahana. Ao anatin'ny fotoana fohy dia iharan'ny fatiantoka i Indiana amin'izao fotoana izao.
Loza sy valisoa
Amin'ny underrated ambany Tsy misy anarany ny anarako, ilay protagonista “Nobody” (nolalaovan'i Terrance Hill) dia naka bala roa tamin'ny alàlan'ny satrok'omby avy amin'i Jack Beauregard (notendren'i Henry Fonda), mba hanaporofoana izany. Ny fifanakalozan-kevitra novaisin'izy ireo tsara:
Jack: Lazao amiko, inona ny kilalaonao?
tsy misy olona: Fony mbola zaza aho dia nody mody hoe Jack Beauregard aho.
Jack: … Ary rehefa lehibe daholo ianareo?
tsy misy olona: Malina kokoa aho. Fa indraindray manana risika kely, afaka mitondra valisoa, fantatrao.
Jack: Raha kely ny risika dia kely ny valisoa.
Ny fahasamihafana lehibe indrindra izay tondroiko amin'ireo kolontsaina misy eo Andrefana sy Afovoany Andrefana dia mitoetra tsara ao amin'io axiom io. Tao anatin'ny 2 taona lasa tamin'ny fidirana an-tsehatra amin'ireo vondrom-piarahamonina web sy teknolojia any Indy sy Bloomington, azoko lazaina tamim-pahatokisana fa ity no olana lehibe tokana nananan'i Indiana tamin'ny nahatonga azy ho Boulder manaraka na ny Silicon Valley manaraka. Izany dia tsy midika izany tsy misy olona maka risika, na tsy misy fivoarana misy dikany mitranga any Indiana. Saingy, ny dikan'izany, ny singa iray lehibe amin'ny fananganana vondrom-piarahamonina teknolojia mahomby dia mbola tsy nividy ny foto-kevitra lehibe mety hitranga.
Ny toerana tena ilaina amin'ny orinasa teknolojia dia mpiara-manorina teknika na mpamorona (duh). Ny fangatahana ireo karazan'olona ireo dia mihoatra lavitra ny famatsiany, ary marina izany any San Francisco ihany koa. Ny tena maha samy hafa azy any Indiana dia ny isan'ny olona tsy mahay mizarazara manana ny fahaiza-manao teknika hananganana vokatra an-tranonkala dia namaly ity famatsiana ity ary mitaky tsy fitoviana amin'ny fananganana "dev shops" izay "outsource" fampandrosoana teknika. Izany dia mitaky ny mpandraharaha tsy ara-teknika hamoaka ny kapitaliny mafy azon'izy ireo sy / na fananana vola mba handoavana olona tsy manana hoditra amin'ny lalao. Niresaka tamin'ny mpandraharaha marobe avy any Indy sy Bloomington aho izay nahazo karama mahatalanjona izay mieritreritra ihany koa fa mpandraharaha satria mamaha ny olana eo am-piandohana. Fa tsy izany tokoa. Tsy mpandraharaha ianao mandra-pandoanao ny ondana, alatsaho amin'ny olon-kafa ny satrokao ary sorona mandra-pamoronanao zavatra mamorona lanja sy mahazo vola. Raha mametraka W-2 isan-taona ianao dia tsy mpandraharaha.
Douglas Karr ary maro hafa no nanao asa mahatalanjona tamin'ny fametrahana an'i Indy ho toerana fidirana Marketing Tech. Mahafinaritra izany. Na izany aza, mpanorina hafa mitady hanangana ny Facebook / Google / sns manaraka, dia mila talenta injeniera matotra. Eto izy io, saingy tsy zaraina araka ny tokony ho izy ary tsy mifanaraka amin'ny insentif. Fantatro ireo mpandraharaha tsy ara-teknika marobe any Indiana izay tena mila talenta dev ary tsy afaka mahazo izany raha tsy mandoa vola izy ireo na manome ny fananana tsy hijanona ao anaty lay raha vao navoaka. Ka noho izany dia mbola resin'i Indiana any San Francisco sy ny lohasaha ireto mpandraharaha manana talenta ireto satria tsy misy isa tsy mifandanja eto. Tsy milaza aho hoe “tsy hahomby raha tsy mihetsika tandrefana.” Ny lazaiko dia sarotra loatra ho an'ireo mpanorina tsy teknika ny mahita mpiara-manorina ara-teknika ilain'izy ireo hifaninana amin'ireo orinasa vao manomboka sy ireo orinasa any Andrefana izay tsy manana olana mitovy amin'izany.
Vaovao tsara ho an'i Indiana anefa. Manomboka mihetsika tsimoramora ny raharaha ary mieritreritra aho fa tsy ho olana io amin'ny lasa. Hafiriana? Tsy haiko, fa raha mpandraharaha tany Indiana aho izay tsy te-hihetsika Andrefana, dia nokapohiko io soavaly io mandra-pahatongany ho lasa molekiola be dia be.
Tags: manambatra nyIndianaMidwestwest
Sep 15, 2010 ao amin'ny 5: PM PM
@dougheinz tena tovolahy marina ianao, Doug. Tena tiako ny lahatsoratra malahelo sy ny fomba fijery mahafinaritra nentinao tamin'ity dinika ity. Sahy aho hoy ianao fa nanana fanantenana be lavitra noho ny sasany amin'ireo feo midwestwest négatif ianao izay nibitsibitsika nibedy ahy tao amin'ny lahatsoratro. Misaotra nandany fotoana!
Sep 15, 2010 ao amin'ny 7: PM PM
“West and Midwest Round II” - lahatsoratra tsara nataon'i @dougheinz tao amin'ny bilaogin'i @ douglaskarr.
Sep 16, 2010 ao amin'ny 2: PM PM
Niverina tany Indianapolis aho taorian'ny 3 1/2 taona tao New York City mba hiditra ao amin'i Raidious. Misy famantarana iray amin'ny fanantenana tsara eo.
Raha vao nifindra tany aho, dia nisy sombin-tsoroka teo an-tsoroko momba ny hatsarantsika tsara eto toa ny toeran-kafa rehetra. Fantatro vetivety fa tena marina izany, saingy ny firesahana izany dia mahatonga anao ho faritany faritany.
Tsy nino ny lehibeko fa avy any Midwest aho satria “mandeha haingana, miteny haingana,” miresaka amin'ny tanako aho ary “tena kolontsaina.” Ny tatitry ny tsipika feno teboka hafa dia tsy azoko natao akory ny nanoritra ny endrika fanjakan'ny Indiana. Izy ireo dia mpamonjy roa NYC.
Na dia mikorontana malalaka aza ny talenta, dia mipoitra avy amin'ny iray amin'ireo morontsiraka roa ny kolontsaina. Zava-misy fotsiny izany. Ary amin'ny ankamaroan'ny fotoana, ny talenta dia manaraka io loharanon'ny kolontsaina io amin'ny iray amin'ireo faritra roa ireo.
Ny fandehanan-katezerana sy fanamarinan-tena tsy làlana aleha. Asa tsara, Doug. Tiako ny feonao.
Raha tsy misy zavatra hafa dia ataovy toy ny any New York. Isaky ny misy olona misalasala anao dia lazao izy ireo fa handeha irery.
Ianao ihany no manao.
Sep 16, 2010 ao amin'ny 3: PM PM
Misaotra lehilahy. Ny anao dia tantara malaza tsara momba ny zava-mitranga rehefa mivory ny olona avy amin'ny faritra sy fiaviana samihafa ary mandingana ireo stereotypes. Tena sarotra ny fiainana amin'ny maha ideolojia antsika, sa tsy izany?